I-3 Thatha-Aways kusuka ku-5 Keys to Marketing Exhibition ye-imeyili | Martech Zone
Ngokusho the Ucwaningo luka-2012 lwe-MarketingSherpa Benchmark, izinkampani eziningana kungenzeka zikhuphule isabelomali sazo se-imeyili ngaphezu kuka-30% ngo-2012. Kodwa-ke, iDelivra ithola ukuthi izinkampani eziningi zisabhekene namasu afanayo ayisisekelo we-imeyili - ukwakhiwa kohlu, okuqukethwe, ukuhlanganiswa, ukwakhiwa, njll.
Ungakhuphuli amabhajethi wakho we-imeyili ngaphandle kokugxila okucacile kokuthi yini okudingeka ithuthukiswe nokuthi yini engafanele. Zinike isikhathi sokugxila ezintweni eziyisisekelo; yilezi imiqondo eyisisekelo eyenza uhlelo lwakho lokuthengisa lwe-imeyili lube oluhlukile. Muva nje, iDelivra ishicilele izitayela, izibalo nezincomo. Ngezansi kukhona ama-3 wokuthatha:
Dala okuqukethwe okususelwa kudatha. Ukudala okuqukethwe okufanele kungaba yinselelo kubathengisi be-imeyili. Hlala uqoqa idatha mayelana nezithameli zakho ukuze wenze okuqukethwe kuhambisane ngangokunokwenzeka. Thola ukuthi izethameli zakho zifuna ukuzwa ini ngokubuza kunhlolovo noma isikhungo sezintandokazi.
Ukwehlukaniswa Kukunika Umngcele Emncintiswaneni. In the I-MarketingSherpa 2012 Inhlolovo Yokumaketha Ye-imeyili Yokuhlola, yathi izinkampani ezingama-95% zidinga ukwenza ngcono ukwahlukaniswa kohlu. Ungasali ngemuva - qala ukugxila ekupheleleni ukuhlukaniswa kwakho manje!
Idizayini yeselula, isikhathi. Ngokusho kombiko ofanayo, ama-58% wabathengisi be-imeyili abakhi ama-imeyili ukuze banikeze kahle kuma-smartphone. Ama-Smartphones aya ngokuya ethandwa kakhulu, ngakho-ke kungani ungaqambi ama-imeyili unalokhu engqondweni?
Tags: Ukukhangisa OkuqukethweIdathadelivraimeyili MarketingMarketingSherpaUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethiukwahlukanisaizitayela
Ukushoda Kwe-Data Data Spectrum Esizayo
Izinto ezi-5 zesiphakamiso Sokuthengisa Esiphumelelayo